Fananganana simika sy solika ary gazy | Tianjin Yixin Pipe Equipment Co., Ltd.
Fiaraha-miasa maharitra miaraka amin'ny CNCEC & Sinopec
Nandritra ny 12 taona R&D, ny milina fanosotra mandeha ho azy YIXIN dia be mpampiasa sy be dera ao amin'ny CNCEC sy Sinopec. Anisan'izany ny fanamboarana simika faha-13, ny fanamboarana simika faha-16, ny fanamboarana simika faha-6 ary ny orinasa maro hafa nanangana milina fantsom-bozaka YXIN mandeha ho azy ho an'ny asa an-trano sy avy any ivelany eny an-toerana. Ny hevitry ny mpanjifa fa ny milina fantsom-bokatra mandeha ho azy YIXIN dia azo entina sy mora ampiasaina, manana fahombiazana tena tsara, endrika welding tsara tarehy ary tahan'ny seam mihombo, mamonjy ny vidin'ny asa ary manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
HW-ZD-200 ampiasaina amin'ny indostrian'ny solika sy gazy
HW-ZD-200, izay natao ho an'ny fantsom-pitrandrahana solika sy gazy, dia nahazo fahombiazana lehibe tamin'ny asa teo an-toerana.
Tianjin Bomec Offshore Engineering Co., Ltd. dia sampana iray an'ny Bomec Offshore Engineering Co., Ltd. Miorina amin'ny famolavolana sy ny fananganana modules isan-karazany, indrindra ny injenieran'ny solika sy gazy any ivelany, zavamaniry entona voajanahary ary fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Ny orinasa dia voatanisa ao amin'ny tsena A-share amin'ny 2016 ary matanjaka. Ity tetik'asa ity dia mandray ny fomba fanaovana tolotra misokatra, ary orinasa 5 no nandray anjara (orinasa iray any Shanghai, orinasa iray any Shandong, orinasa iray any Guangzhou, ary orinasa iray any Zhejiang). Nandritra ny fizotran'ny tolotra, ny fitaovan'ny mpamatsy isan-karazany dia nanao fifaninanana fantsom-bozaka teo an-toerana.
Ny mpanjifa dia nanadihady fatratra ny fahombiazan'ny milina, ny fahombiazan'ny welding, ny famolavolana, ny tahan'ny fandalovana ny lesoka ary ireo tondro hafa. Tamin'ny farany, niavaka ny fitaovan'ny orinasanay YX-150 ary nahazo ny tolotra ho an'ity tetikasa ity. Niara-niasa tamin'ny Bomec Offshore Engineering, nividy andiany ilay tetikasa. Hatramin'izao, ny totalin'ny fividianana dia manodidina ny 20 set.